Ifulethi elinendawo yokubuka ulwandle nokuphumula. - I-Airbnb
Ifulethi elinendawo yokubuka ulwandle nokuphumula.
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Iluta
U-Iluta Ungumbungazi ovelele
Indlu isogwini lolwandle,lena yindawo ekhethekile yokubuka kusukela ku-terrace futhi embhedeni uzokwazi ukubuka ukushona kwelanga futhi ulalele imisindo yolwandle. Amakamelo ethu aklanyelwe izimpelasonto zezithandani nabangane.
Ukuthula nokuzola kuzokusiza ukhohlwe nsuku zonke.
Sinakekele konke ukuze sikwenze uzizwe ukhululekile futhi ukhululekile - uma unezifiso ezikhethekile, sicela usitshele - sizozama ukugcwalisa konke, ngemva kokuhamba kwakho ngeshwa ngeke kwenzeke - jabulela!
Kukhona ne-sauna yokusetshenziswa ngokuqokwa.
Phakathi nenkathi yokushisisa, ngokuvamile kusukela ngo-October 1 kuya ku-April 30. Ufinyelela izinga lokushisa eliphansi egumbini eliphakathi kuka-20 no-22 degrees Celsius. Nokho, la mazinga okushisa aphansi akudingeki afinyeleleke "ubusuku nemini". Ebusuku, okungukuthi phakathi kuka-11 p.m. no-6 a.m., ama-Celsius angu-18 anele ngemva kosinki wasebusuku.
Unethuba elihle lokudla okumnandi ku-cafe Saltwater noma i-cafe Nods, okungaphansi kwemizuzu eyisikhombisa uhamba ngezinyawo ukusuka ekamelweni.
Umzila omncane oholela olwandle nokufinyelela olwandle kuvela ngokuqondile endaweni yethu.
Ukuxhumana okuvulekile nokulula kubaluleke kakhulu kithi - kuphela uma uveza izifiso nezidingo zakho sizokwazi ukusiza.
UIluta Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Zvejniekciems namaphethelo